samedi, 01 juin 2019 19:17
Somary very lanja kely ny vola malagasy, raha oharina tamin'ny fiandohan'ny volana mey teo:
31 mey 2019:
1 Euro = 4 051.79 MGA (4 048.27 MGA, 02 mey 2019)
1$Usd = 3 645.82 MGA (3 620.42 MGA, 02 mey 2019)
(Loharano: Banky foibe)
Nanatanteraka ny hetsika fitoriana Filazantsara faha-5 ny teo anivon'ny FJKM foibe, izay natao tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina.
Maro ireo hetsika tety an-toerana toy ny fitiliana sy fitsaboana maimaim-poana, fanomezana rà, ny fijerena ny tosi-drà, fivarotana boky aram-pilazan-tsara, Fitoriana Filazantsara, fitoriana an-kira, fanatanjahan-tena.
samedi, 01 juin 2019 13:21
UEFA Champions League: Famaranana Tottenham - Liverpool
Hotanterahina anio alina ao amin’ny kianja Estadio Metropolitano ao Madrid renivohitr’i Espaina ny lalao famaranana amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Eorôpa amin’ny baolina kitra.
Famaranana ny andiany faha-64 izy ity hifandonan’ny klioba anglisy roa dia Tottenham sy Liverpool.
Sambany ho an’ny Tottenham no tonga amin’ny dingana famaranana toy izao, raha mikendry ny handrombaka fanin’eniny ny tompondaka i Liverpool.
Efa in-170 no nifandona i Tottenham sy Liverpool tamin’ny lalao rehetra nandraisan’izy ireo anjara, ka nandresy in-79 ny les Reds (Liverpool) raha fandresena in-78 ho an’ny Spurs (Tottenham). In-43 nirava ady sahala samy tsy nitoko ny ekipa roa tonta.
samedi, 01 juin 2019 11:05
Mahazoarivo: Nidinika ny sehatry ny filaminana taorian’ny fifidianana
Nisy, omaly, teny amin’ny Lapan’i Mahazoarivo, fivoriana mahakasika ny filaminana taorian’ny fifidianana solombavahoaka notarihin’ny Praiministra Ntsay Christian, niaraka tamin’ireo minisitra voakasiky ny sehatry ny filaminana.
Mahatsapa ny governemanta fa misy ny kandida sasantsasany, amina tanan-dehibe vitsivitsy, manohitra ny mety ho voka-pifidianana ka mikasa hitarika hetsika izay mety hanakorontana ny filaminam-bahoaka.
samedi, 01 juin 2019 11:02
Manomboka anio ny « Iray volan'ny teny malagasy ».
samedi, 01 juin 2019 10:57
Mahazoarivo: Réunion post-électorale pour évaluer la situation sécuritaire
Une réunion des membres du gouvernement, en charge de la sécurité, s’est tenue hier à Mahazoarivo sous l’égide du Premier ministre, Chef du gouvernement, Christian Ntsay, concernant la situation sécuritaire post-électorale.
samedi, 01 juin 2019 10:34
Kitra CAN 2019: Manomantena any Frantsa ny Barea Madagasikara
Nanomboka omaly ao Lisses (Essonne – Frantsa) ny famondronana voalohany ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny baolina kitra, ho fanomanana ny fiatrehana ny fifaninana kaontinantaly, iadiana ny amboaran’i Afrika, hatao any Egipta ny 21 jona hatramin'ny 19 jolay.
Hihazo avy hatrany an'i Luxembourg ny Barea aorian’izay, hiatrika ny lalao ara-pirahalahiana amin’ny ekipan’io firenena io rahampitso alahady 2 jona.
samedi, 01 juin 2019 10:19
Maroantsetra: Nandefasana mpitandro filaminana fanampiny
Fiaramanidina manokana no nanatitra azy ireo omaly, hanampy ireo eto an-toerana. Mifanojo indrindra amin’ny hetsi-panoherana voka-pifidianana ny fahatongavan’ireo andiana mpitandro ny filaminana.
Tato anatin’ny telo andro izay dia nisy fidinana an-dalambe nataon’ny andian’olona maro manohitra ny hosoka sy ny fanodinkodinana voka-pifidianana solombavambahoaka, araka ny filazan’izy ireo.
Nifamory teo amin’ny kianja monisipaly ireo mpanao fihetsiketsehana, omaly, avy eo nitanjozotra nilanja sorabaventy sy sainam-pirenena niazo ny biraon’ny Distrika hanatitra ireo porofo eo ampelan-tanan’izy ireo momba ny fisian’ny hosoka.
samedi, 01 juin 2019 10:08
Solika: Tsy misy fiovana ny vidiny
Mbola ny vidin-tsolika nihatra tamin’ny 4 desambra 2018 no manankery hatramin’ny maraina io eny amin’ireo toby mpaninjara an’ireo kaompanian-tsolika efatra misy amin’izao fotoana.
Lasantsy : 4 200 Ariary
Gazoala : 3 550 Ariary
Solitany : 2 630 Ariary
samedi, 01 juin 2019 10:05
1er juin: Lait